Tag: sms iwu | Martech Zone
Kpido: sms order
Re-ịtụ site na ozi ederede akpaghị aka dị ọnụ ala ma dịkwa irè karị inweta usoro nke abụọ ma ọ bụ nke atọ site na ndị ahịa gị dị. Kwụsị mkpọtụ niile - hapụ ndị ahịa gị ịtụ ebe na otu ha si enwe ahụ iru ala. Na TxTFi maka Shopify, ịgaghị eme ihe ọ bụla. Ọ na-akpaghị aka. Naanị tinye ya ma chefuo ya. Iwu SMS maka Shopify TxTFi plọg n'ime Shopify na-akpaghị aka ma rute ndị ahịa gị site na